स्वेदश तथा विदेशबाट अध्यक्ष प्रचण्ड परिवारलाई समवेदना व्यक्त - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
स्वेदश तथा विदेशबाट अध्यक्ष प्रचण्ड परिवारलाई समवेदना व्यक्त
मंसिर ४ गते, २०७४ - १२:५७
काठमाडौं । हृदयघातबाट सुपुत्र प्रकाश दाहाल गुमाएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार सीता दाहाल लगायत परिवारलाई चीन, भारत, राष्ट्र संघ लगायतका विभिन्न देश, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले समवेदना प्रकट गरेका छन ।
आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका एक मात्र सुपुत्र प्रकाश दाहालको निधन भएपछि दिउँसो नेपालमा रहेको चीनियाँ दुताबासले अध्यक्ष प्रचण्डलाई समवेदना प्रकट गरेको थियो । समवेदनामा चीनले सुपुत्र दाहालको निधनले चीन मर्माहत भएको बताउँदै प्रचण्डको पीडामा चीन साथमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोमबार बिहान नेपालका लागि चीनियाँ राजदूत यु होङ्ले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी समवेदना प्रकट गरे ।
आइतबार दिउँसो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले टेलिफोन गरी अध्यक्ष प्रचण्ड र परिवारमा समवेदना प्रकट गरे । उनले नेपालले एउटा होनाहार युवा नेता र प्रचण्ड परिवारले कर्मठ छोरो गुमाएकोमा शोक व्यक्त गरे । लगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरी पेरिसडाँडा पुगी अध्यक्षलाई समवेदना प्रकट गरे ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय कार्यालयबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई समवेदना प्रकट गरिएको छ । भलेरि जुलिण्डले पठाएको समवेदना पत्रमा प्रकाश दाहालको अल्पायू र अकल्पनीय निधनले संयुक्त राष्ट्र संघ मर्माहत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सोमबार नै रुसी दूताबासबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई समवेदना प्रकट गर्दै राजदूत एन्ड्री बुडनिकले अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा तथा युवा नेता प्रकाश दाहालको आकस्मिक निधनले आफू स्तव्ध भएको उल्लेख छ ।
मंसिर ४ गते, २०७४ - १२:५७ मा प्रकाशित
khabar Dabali-J का अरु लेखहरु पढ्नुस्
किन खोजिँदैछ १ सय कर्मचारी परिचालन गरेर एउटा बघिनी ?
मध्य भारतमा ठूलो स्तरमा एउटा खोजी अभियान जारी छ। वन विभागका एक सयभन्दा बढी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, बेहोस...
ओली सरकारप्रति बाबुराम भट्टरार्इको टीप्पणीः न हाँसको चालमा न कौवाको
गोरखा । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको सरकारको...
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अटम अफर (Autumn Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफरहरु सोमबार...
विमानस्थलमा उड्ने तयारीमा रहेको एउटा विमानको ढोकाबाट एक कर्मचारी खसेर घाइते भएकी छिन्। सोमबार बिहान...
सोल । उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच सोमबार भूमिगत रेलमार्ग निर्माणका लागि सहमति भएको समाचार छ । कोरियाली...
टीकाको दिन प्रहरीको निःशुल्क बस
कास्की । दशैँको टीकाको दिन पोखरामा सशस्त्र प्रहरी बलले निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कात्तिक...
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणलाई...
किन जाँदैछन् रामचन्द्र पाैडेल १२ दिन लामो भारत भ्रमणमा ?
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । १२ दिन लामो...
चौतारा । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको अन्तिम काम अझै ७ दशमलव ३ किमी बाँकी छ । सुरुङभित्रको ढलान...